आलमको बचाउ गर्दै देउवाले भने, ‘१२ वर्षअघिसम्म सरकार के हेरेर बसेको थियो ? ’ – Khabar Silo
भक्तपुर : कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले जनताको मन जित्ने काम गर्न आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका छन्। स्थानीय तहअन्तर्गत जिल्ला समन्वय समिति र गाउँपालिकामा कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि आयोजना गरिएको दुईदिने प्रशिक्षणमा शीर्ष नेताले कांग्रेसलाई संघीय सत्तामा पुग्ने आधार तयार हुने गरी जनताको पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
‘तपाईंहरूको काम हेरेर जनताले सिंगो कांग्रेसको मूल्यांकन गर्ने हो’, उनीहरूले एकै स्वरमा भने, ‘जनताले कांग्रेसलाई बुझ्ने तपाईंहरूको काम कारबाही र व्यवहार हो। त्यसैले कांग्रेसले राम्रो काम गर्छ, सुशासन ल्याउँछ, विकास ल्याउँछ भन्ने दृष्टान्त तपाईहरूले काममार्फत् प्रस्तुत गर्नुपर्छ।’
शीर्ष नेताहरूले कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले कम्युनिस्ट पार्टीले जितेका गाउँपालिका भन्दा फरक र नमुना काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कम्युनिस्टहरूले कुरा मात्रै गर्छन् तर कांग्रेसले कुरा होइन काम नै गर्छन् भन्ने फरक नमुना प्रस्तुत गरी जनताको मन जित्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित प्रशिक्षणको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकलाई कम्युनिस्ट सत्ता बनाउन सरकार उद्यत रहेको जिकिर गरे।
ओली सरकार सुरक्षाकर्मी र प्रशासन कम्युनिस्टप्रति प्रतिबद्ध बनाउन लागि परेको उनको आरोप थियो। कांग्रेसले जितेको स्थानीय तहमा सरकारले आफू अनुकूल कर्मचारी पठाएर जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न नदिएको उनको आरोप थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षीको नेताका नाताले आफूले सरकारलाई यो विषयमा धेरैपटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै देउवाले आक्रोश पोखे। ‘काम नगर्ने कर्मचारीलाई नपठाउन मैले धेरैपटक भनेँ तर सरकारले सुन्दै सुनेन’, उनले भने, ‘यस्तो सरकारलाई जनताको आन्दोलनबाटै लखेट्नुपर्ने बेला आएको छ। जनताले चुनेका प्रतिनिधि पनि सरकारविरुद्ध आन्दोलित हुनुपर्ने भएको छ।’
कम्युनिस्टहरूले झूटा नारा र आश्वासन बाँडेर काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाएको उनको भनाइ थियो। ‘कम्युनिस्टहरूले झूटा नारा र आश्वासनमात्रै दिए। विकासको नारा दिएको उल्टै जताततै भ्रष्टाचार व्याप्त छ’, सभापति देउवाले भने, ‘त्यसैले जनता कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबाट वाक्कदिक्क भइसकेका छन्।’
कार्यक्रममा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै अधिकार केन्द्रिकृत गरी स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गरिरहेको आरोप लगाए। सरकारले संघीयता, लोकतन्त्रलगायतका उपलब्धिलाई नै कमजोर बनाउन लागिपरेको उनको भनाइ थियो।
ओली सरकार अधिनायकवादतर्फ अघि लम्केको दावी गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले भने, ‘ओली सरकारको नालायकी र असक्षमताको पनि प्रशस्ती गाउनुपर्ने बेला आएको छ। सरकारको उपलब्धि नदेख्नेहरू सामन्तवादी भन्नु यसैको उदाहरण हो।’
पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीलाई जनताबीच विस्तार गर्न जनप्रतिनिधिले पार्टीको पूरकको रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए। केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुखसमेत रहेका उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टीको प्रभावकारिता र परिणाममुखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पार्टीका महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले मुलुक अप्ठ््यारो अवस्थामा भएकाले कांग्रेस संयमित भएर जिम्मेबारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने समय आएको बताए। पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुलुक कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादतर्फ अघि बढेको बताउँदै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मै कांग्रेस एकगठ भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले कम्युनिस्ट सरकारले रणनीतिक रूपमा संविधान उल्लंघन गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए।
दुईदिन सञ्चालन हुने प्रशिक्षणमा कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित एकसय ८९ गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उपस्थिति छ। प्रशिक्षणमा पार्टी र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, पार्टी सिद्धान्त, कानुन, नीति तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयन तथा त्यसको व्यवस्थापनका विषयमा कक्षा लिइने बताइएको छ।
कांग्रेसलाई झुटा मुद्दामा फसाउन खोजियो
देउवाले प्रशिक्षण कार्यक्रममा बाह्रवर्ष अघिको घटना व्युँताएर कांग्रेसलाई फसाउने षड्यन्त्र भएको दाबीसमेत गरे। आफ्ना सांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई १२ वर्षपछि झूटा मुद्दा लगाएर फसाउन खोजेको भनाइ उनको थियो। ‘नभए १२ वर्षअघिसम्म सरकार के हेरेर बसेको थियो ? ’, सभापति देउवाले सरकारलाई प्रश्न गरे, ‘आलमलाई पक्राउ गरी दुःख दिने काम भएको छ।’
पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले रौतहटमा ‘राज्य आतंक’ सिर्जना गरिएको बताए। उनले काग्रेसविरुद्ध सरकारले अदालतदेखि प्रसाशनसम्म नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गरेको दाबी गरे।